Best Dental Care | LATHA DENTAL CLINIC| Services
သင်အလှတရားကို ဖုံးကွယ်နေစေတဲ့ အရာမှန်သမျှကို သံယောဇဉ်တွယ်မနေပါနဲ့… ပြုပြင်သင်တာကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်လိုက်ပါ။ သွားနဲ့ခံတွင်းအတွက် အလှတရားဆိုရင် Latha Dental Clinic က သင့်အတွက် အမြဲ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အလှပဆုံး အပြုံးတစ်ပွင့်ကို Latha Dental Clinic မှာလာရောက်ဖန်တီးလိုက်ပါ။
✔️တိုင်တေနီယမ် Implant ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်လို့ သွားဖုံးအောက်ရှိ မေးရိုးကို အသေးစားခွဲစိတ်မှုလေး လုပ်ရပါမယ်…
Latha Dental Clinic မှာသွားစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကုသမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာမဖြစ်ရလေအောင် အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာဝန်ကြီးများ ကိုယ်တိုင် အသေးစိတ် စစ်ဆေးကုသပေးနေပါတယ်။
လူကြားထဲ သွားပေါ်အောင်ပြုံးနိုင်ဖို့ သင့်သွားတွေဟာ မညီညာ၊ ကျဲနေတာ၊ သွားတွေ ထပ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လို့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေရပါသလား? Invisalign လို့ခေါ်တဲ့ အကြည်ရောင် သွားစွပ်လေးဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ သွားညှိလို့ရနေပါပြီ .. Invisalign ရဲ့ သာလွန်တဲ့အ ချက်တွေကတော့. . .
✅တစ်ခြားသွားညှိတဲ့ပုံစံတွေလို Bracket တပ်နေစရာမလိုပဲ အကြည်ရောင် အစွပ်လေးကို လွယ်လွယ်ကူကူ တပ်ဆင်နိုင်တာကြောင့် သွားညှိထားခြင်းကို သိသိသာသာ မပေါ်လွင်စေပါဘူး။
✅အစွပ်ကို လွယ်ကူစွာ ဆေးကြော သန့်စင်နိုင်ပါတယ်။
✅ခေတ်မှီနည်းစနစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ကုသမှုအပိုင်းကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
✔️အပေါ်သွားနှင့် အောက်သွား ဟနေတဲ့သူတွေ Invisalign ကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
Latha Dental Clinic မှာ Invisalign ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တပ်ထားချိန် ၂နှစ်ခွဲ ကြာမြင့်မှာပါ ။ ကုသမှုအစမှာတော့ သင့်ရဲ့သွားနေရာ ရွေ့မှာဖြစ်လို့ အနည်းငယ် နာကျင်မှုမျိုးသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် နည်းပညာကိုသုံးပြီး ကုသပေးတာကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာဝန်ကြီးတွေကသာ ကုသမှုပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ သွားအရမ်းထပ်ပြီး ညှိဖို့နေရာလွတ်မရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာသာ သွားနှုတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ရက်ချိန်းအတိုင်း မပျက်မကွက်ပြသဖို့လိုပါတယ်။
သွားပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်တိုင်း အပြုံးလေးတွေ အသက်ဝင်လှပစေဖို့ သွားလေးတွေဟာ ညီညာလှပနေဖို့ လိုပါတယ်နော်။ Hollywood Smile လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ရ တဲ့ Veneer ကုသမှုလေးကတော့ ရှိပြီးသား သွားလေးတွေ အပေါ်ကနေ ညီညာလှပတဲ့ ကြွေသွားလေးတွေ ထပ်ကပ်လိုက်ပြီး ပြုံးလိုက်တိုင်း ယုံကြည်မှု ရှိရှိ နဲ့ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင်တွေလို အပြုံးတွေဟာ အသက်ဝင်လှပစေမှာပါ။
✅ဒီကုသမှုလေးကိုတော့ သွားကြဲ/ သွားထပ်နေတဲ့သူတွေ၊ သွားအရောင် မလှတော့တဲ့သူတွေ၊ သွားပဲ့နေတဲ့သူ၊ ရှေ့သွားပိုးစားနေတဲ့သူ ၊ ရှေ့သွားအတိုအရှည် မညီတဲ့သူတွေ အများဆုံး ကုသကြပါတယ်။
Veneer ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ သွားအရောင်မညီမှာ၊ Veneerပြုလုပ်ထားတဲ့ သွားပဲ သိသိသာသာ ထင်ရှားနေတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် Latha Dental ဆေးခန်းကနေ အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် သွားတွေနာခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်း၊ သွားမျက်နှာပြင် ကြွေလွှာဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံး အနေအထားရအောင် အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ကုသပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Gingivitis Check (သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများကို စစ်ဆေးပေးခြင်း)
Tooth Filling (သွားဖာခြင်း)
Dental Check (သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများကို စစ်ဆေးပေးခြင်း)
Crown and Bridge (သွားအသေစိုက်ခြင်း)
Laser Treatment (Laser ရောင်ခြည်ဖြင့်သွားဖြူအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း)